Debutant Piedt stars in South African 9 wicket victory over Zimbabwe in Harare Test - New Delhi Times - India's Only International Newspaper
Debutant Piedt stars in South African 9 wicket victory over Zimbabwe in Harare Test
Debutant South African spinner Dane Piedt picked up 4 for 62 in the Zimbabwe second innings and finished with a match haul of eight for 152 and played a vital role in South Africa’s victory over Zimbabwe in the one off Harare Test. Dale Steyn picked up 3 for 38 and finished the match with overall figures of eight for 84 in the match to move level with Ian Botham on 383 careers Test wickets.
Trailing by 141 runs, Zimbabwe offered some resistance in the opening session of day 3 with night watch Tiripano consuming 63 balls for his 5 runs. However, in the second session Piedt, Morkel (3 for 15) and Steyn ran through the Zimbabwe batting. Zimbabwe were all out for 181 setting the visitors a target of 41 which they achieved easily with the loss of Dean Elgar’s wicket. Piedt was named man of the match
Brief Scores: Zimbabwe 256 (Taylor 93, Masakadza 45, Steyn 5 for 46, Piedt 4 for 90) and 181 (Sibanda 45, Mutumbani 43, Piedt 4 for 62, Morkel 3 for 15, Steyn 3 for 38) lost to South Africa 397( Du Plessis 98, De Kock 81, Elgar 61, Duminy 55, Nyumbu 5 for 157) and 44/1 (Elgar 21, Peterson 17*, Chatara 1 for 5).